Global Voices teny Malagasy · 2 Janoary 2017
Tantara tamin'ny 02 Janoary 2017
Amerika Latina 02 Janoary 2017
Moa ve mingerongerona ny kibonao ao an-trano rehefa fety ? Ampihinano ireo sakafo matsiro, maro loko isan-karazany avy amin'ireo fomban-drazana any Amerika Latina rehefa faran'ny volana desambra ny masonao.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 02 Janoary 2017
"Famirapiratana mahafinaritra eny amin'ny habakabaka mivolon'alina"."Tena mahavalalanina."
Nahatratra ny teboka faratampony ny fanentanana hamonjena ilay mpiaro ny zon'ny sivily Arash Sadeghi. Tao anatin'ny roa volana nanaovany fitokonana tsy misakafo, maro no manahy hoe ambivitra ny ain'i Sadeghi.
Ilay antsoin'ny fikambanana iray mpiaro zon'olombelona hoe"fitomboan'ny famoretana tsy itandroan'ny filoha Shinoa Xi Jinping hasasarana ataony amin'ny fiarahamonina sivily" no itazonana ilay mpanorina ny tranokalam-baovao Shinoa an'olontsotra